अक्षय कुमारको नाममा बनेका तीन कीर्तिमान, जो आजसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार उनलाई नचिन्ने सायदै होला । अक्षयले अभिनय गरेका केही चलचित्र ब्लकबस्टरको सूचीमा सूचिकृत छन । उनले आफ्नो करियरमा यस्ता केहि रेकर्ड बनाउन सफल भएका छन जसलाई आजसम्म कुनै अभिनेताले पनि तोड्न सकेका छैनन्
१०० करोडको रेकर्ड!
याे पनि पढ्नुस अक्षयको ‘गुड न्यूज’ को सानदार ओपनिङ
अक्षय कुमारले १ बर्षमा लगातार ३ सय करोडको कमाई गर्ने रेकर्ड बनाएका छन। उनि अभिनित १० चलचित्रले १०० करोडको आँकडा पार गरेको छ। जसमध्ये ३ चलचित्रले २ सय करोडको व्यापार गरेको छ। उनी अभिनित २.० ले वैश्विक बक्स अफिसमा ८ सय करोड भन्दा बढी व्यापार गरेको छ। जुन बलिउडको सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने तेस्रो चलचित्र हो।
याे पनि पढ्नुस सन्नी लियोनीपछि पार्दै अर्की पोर्नस्टार बलिउडमा
५० हिट फिल्म
अक्षय कुमारको नाममा बलिउडमा ५० भन्दा बढी हिट फिल्म दिने अभिनेताको रेकर्ड बनेको छ । जसको आसपासमा आजसम्म पनि कुनै अभिनेता पर्न सकेका छैनन् ।
१३,००० करोडको रेकर्ड
अक्षयले आफ़्नो करियरमा अहिलेसम्म ११० चलचित्रमा अभिनय गरेका छन जसमध्ये उनको चलचित्रले कुल १३००० करोडको कलेक्सन गरेको छ। जुन कलेक्सनको पनि बलिउडमा रेकर्ड बनेको छ।
याे पनि पढ्नुस अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले कसरी घटाइन ३५ किलो तौल
ट्याग्स: अक्षय कुमार, बलिउड